ဝါရှင်တန်က လမ်းနာမည်တခု တရုတ်ဆရာဝန်အမည်ပြောင်းဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်ထား - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
တရုတ်ဆရာဝန် Dr Li Wenliang.
တရုတ်နိုင်ငံကနေစပြီး ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ တရုတ်ဆရာဝန် Dr. Li Wenliang ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ တရုတ်သံရုံးရှေ့က လမ်းကို Dr. Li လမ်းလို့ နာမည်ပြောင်းဖို့ အဆိုတရပ်ကို အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေက တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်သံရုံးရှေ့ကလမ်းကို Dr. Li လမ်းလို့ နာမည်ပြောင်းဖို့ ဥပဒေကြမ်းတရပ်ကို တင်သွင်းခွင့်ရတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူတယ်လို့ Wyoming အောက်လွှတ်တော်အမတ် Liz Cheney က ကြာသပတေးနေ့က ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှာလည်း အလားတူ ဥပဒေကြမ်းတရပ်ကို Nebraska အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ben Sasse က တင်သွင်းခဲ့ပြီး Dr. Li ဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၀ူဟန်မြို့မှာ SARS ရောဂါနဲ့ အလားသဏ္ဌာန်တူတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို Dr. Li က ဆေးကျောင်းက ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတွေကို စပြီး သတိပေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အတွက် တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက သူ့ကိုဆင့်ခေါ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ အဲဒီအချိန်က အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ။
သူက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကမ္ဘာလုံးကို သတိပေးဖို့လုပ်တာကို တရုတ်အစိုးရက နှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူလည်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဝါရှငျတနျက လမျးနာမညျတခု တရုတျဆရာဝနျအမညျပွောငျးဖို့ လှတျတျောမှာ အဆိုတငျထား
တရုတျနိုငျငံကနစေပွီး ကူးစကျပြံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပျရောဂါဆိုးနဲ့ ပတျသကျပွီး စတငျဖျောထုတျခဲ့သူ တရုတျဆရာဝနျ Dr. Li Wenliang ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ဝါရှငျတနျဒီစီမွို့တျောမှာရှိတဲ့ တရုတျသံရုံးရှကေ့ လမျးကို Dr. Li လမျးလို့ နာမညျပွောငျးဖို့ အဆိုတရပျကို အမရေိကနျ အောကျလှတျတျောမှာ လှတျတျောအမတျတှကေ တငျသှငျးလိုကျပါတယျ။
တရုတျသံရုံးရှကေ့လမျးကိုDr. Li လမျးလို့ နာမညျပွောငျးဖို့ ဥပဒကွေမျးတရပျကို တငျသှငျးခှငျ့ရတဲ့အတှကျ သူ့အနနေဲ့ ဂုဏျယူတယျလို့ Wyoming အောကျလှတျတျောအမတျ Liz Cheney က ကွာသပတေးနကေ့ ပွောပါတယျ။
တခြိနျတညျးမှာပဲ အမရေိကနျ အထကျလှတျတျောမှာလညျး အလားတူ ဥပဒကွေမျးတရပျကို Nebraska အထကျလှတျတျောအမတျ Ben Sasse က တငျသှငျးခဲ့ပွီး Dr. Li ဟာ တရုတျလူမြိုးတှရေဲ့ သူရဲကောငျးဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဝူဟနျမွို့မှာ SARS ရောဂါနဲ့ အလားသဏ်ဌာနျတူတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတမြိုး ဖွဈနတေယျဆိုတာကို Dr. Li က ဆေးကြောငျးက ကြောငျးနဘေကျ သူငယျခငျြးတှကေို စပွီး သတိပေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီလိုပွောခဲ့တဲ့အတှကျ တရုတျအာဏာပိုငျတှကေ သူ့ကိုဆငျ့ချေါပွီး ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျပွီး သတျမှတျထားတဲ့ အစိုးရတာဝနျရှိသူကလှဲပွီး ဘယျသူမှ ပွောခှငျ့မရှိဘူးလို့ အဲဒီအခြိနျက အမိနျ့ထုတျခဲ့တာပါ။
သူက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျပွီး တကမ်ဘာလုံးကို သတိပေးဖို့လုပျတာကို တရုတျအစိုးရက နှုတျပိတျတဲ့အနနေဲ့ ထိနျးသိမျးခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ သူလညျး COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျခံရပွီး ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။